Badweyntimes.com » Daawo+Akhriso: khudbad kicisay Dareenka Shacabka uu Jeediyay Musharax Farmaajo…Badweyntimes.com
Musharax Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo oo Baarlamaanka Qudbad ka horjeediyay ayaa sheegay in Siyaasadiisa ay Kow ka tahay Ammaanka,waxaana uu Xusay in Dowladda hadda jirta aysan Ammaanka Muhiimad siin islamarkaana ay ku soo Koobantay iyo Tacsi oo kaliya.
Musharax Farmaajo ayaa sidoo kale sheegay inuu u dhawaan doono Shacabka Soomaaliyeed islamarkaana uu Shacabka gaarsiin doono in ay Shabaab la dagaalamaan noo ay Dowladooda Aaminaan.
Dhanka Musuq Maasuqa ayuu sheegay inuu la geli doono Dagaal lamid ah midka Shabaab.
Dhanka Dib u heshiisiinta ayuu Xusay Farmaajo inuu ku dadaali doono islamarkaana uu soo celin doono Midnimadii Soomaaliya si Dalka loo mideeyo.
Musharax Farmaajo ayaa sheegay in Haddii Khilaaf soo kala dhexgalo asaga iyo Xukumaddiisa uu Talada ku soo celin doono Baarlamaanka.
XOG: Keating oo diyaariyay Qorshe Halis ku ah Musharaxiinta Xilka M/weynaha ee Wata Lacagta badan…
Hal Jawaab : Daawo+Akhriso: khudbad kicisay Dareenka Shacabka uu Jeediyay Musharax Farmaajo…
Aniga oo ah gabdh Soomaaliyeed kana mid ahaa dadkii u banaanbax farmaajo watigii uu ahaa ra’isul wasaraaha taageera buuxdana u hayey ayaan waxaan Ummadda Soomaaliyeed u sheegay inaan KU qaladamay. Maxaa yeelato waxaan ogaaday inuusan daacan ahayn markii uu qiriwaayey wanaaga iyo horumarka ay gaadhay Caasimada SOomaaliya oo maanta ilaah mahadii in dhalinyarada ay shaqeystaan ama bajaaj ha wado ama shirkad ha u shaqeyo ama waxbarash ha aadaan ama NGO laga soo raray Nairobi ha u shaqeystaan. Intaa diiday inuu qiro. waxba nooma soo wado EE ka digtoonaada reer muqdisho gaar ahaan